August 2018 - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Adobe Products Computer software Photoshop Portable
Photoshop CS6 (64bit) Portable
Maung Pauk at 11:01:00 AM 1
Adobe Photoshop CS6 ကို Install လုပ်စရာမလိုဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Portable Version ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ဖိုင်ကိုဖြည်ချပြီး Run လိုက်ရင် Portable အဖြစ် ဖြည်ချပေးပါလိမ့်မယ်.. အဲဒီထဲက photoshop.exe ကို ဒီအတိုင်း Run လိုက်ရုံနဲ့ Photoshop CS6 ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ..
Adobe Photoshop CS6 ကို Install လုပျစရာမလိုဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ အသုံးပွုနိုငျဖို့ Portable Version ကို တငျပေးလိုကျပါတယျ.. ဒေါငျးလို့ရလာတဲ့ ဖိုငျကိုဖွညျခပြွီး Run လိုကျရငျ Portable အဖွဈ ဖွညျခပြေးပါလိမျ့မယျ.. အဲဒီထဲက photoshop.exe ကို ဒီအတိုငျး Run လိုကျရုံနဲ့ Photoshop CS6 ကို အသုံးပွုနိုငျပါပွီ..
PS_CS6 Portable 13.1.2 (64-bit).zip : 105.18 MB
AntiMalware Computer software USB
USB Safely Remove v6.1.2.1270 Full
Maung Pauk at 12:33:00 PM 0
Windows PC အတွက် USB Flash Drive တွေကို Safe Remove လုပ်ဖို့ USB Safely Remove ဖြစ်ပါတယ်.. ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Windows7နောက်ပိုင်း Windows OS တွေမှာ မလိုအပ်ပါဘူး.. ဒါပေမယ့် တခါတလေ USB Drive ကို Remove လုပ်မရဘဲ ပေကပ်ကပ် ဖြစ်နေတဲ့အခါ USB Safely Remove က အဆင်ပြေပြေ Remove လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်..
Patch မလုပ်ခင် Antivirus ကို ခဏပိတ်ထားရပါမယ်..
1. Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ.. ပြီးရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေ Tray ထဲမှာ USB Safely Remove ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit ကိုနှိပ်ပါ..
2. Patch.exe ဖိုင်ကို ကော်ပီကူးပါ.. Desktop ပေါ်က USB Safely Remove icon ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုရွေးပါ. Windows 64bit သမားတွေက USB Safely Remove အောက်ကိုရောက်ရပါမယ်... ပြီးရင် Patch.exe ကို Paste လုပ်ပါ..
3. ပြီးရင် Patch.exe ကိုညာကလစ်ထောက်ပြီး Run as Administrator နဲ့ Run ပါ.. Patch ကိုနှိပ်ပါ.. ဒါမှမဟုတ် Generate ကိုနှိပ်ပြီး Serial Key ကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်..
Windows PC အတှကျ USB Flash Drive တှကေို Safe Remove လုပျဖို့ USB Safely Remove ဖွဈပါတယျ.. ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ Windows7နောကျပိုငျး Windows OS တှမှော မလိုအပျပါဘူး.. ဒါပမေယျ့ တခါတလေ USB Drive ကို Remove လုပျမရဘဲ ပကေပျကပျ ဖွဈနတေဲ့အခါ USB Safely Remove က အဆငျပွပွေေ Remove လုပျပေးနိုငျပါတယျ..
Patch မလုပျခငျ Antivirus ကို ခဏပိတျထားရပါမယျ..
1. Setup နဲ့ Install လုပျပါ.. ပွီးရငျ ကှနျပြူတာရဲ့ ညာဘကျအောကျခွေ Tray ထဲမှာ USB Safely Remove ကို ညာကလဈထောကျပွီး exit ကိုနှိပျပါ..
2. Patch.exe ဖိုငျကို ကျောပီကူးပါ.. Desktop ပျေါက USB Safely Remove icon ကိုညာကလဈထောကျပွီး Open File Location ကိုရှေးပါ. Windows 64bit သမားတှကေ USB Safely Remove အောကျကိုရောကျရပါမယျ... ပွီးရငျ Patch.exe ကို Paste လုပျပါ..
3. ပွီးရငျ Patch.exe ကိုညာကလဈထောကျပွီး Run as Administrator နဲ့ Run ပါ.. Patch ကိုနှိပျပါ.. ဒါမှမဟုတျ Generate ကိုနှိပျပွီး Serial Key ကိုလညျး ရယူနိုငျပါတယျ..
One of the recommended software for users USB drives is USB Safely Remove . This software isaprofessional driver for USB drives. USB Safely Remove users flash drives, portable devices and keep time and high efficiency of these toolsaMac does. With the help of this software to remove data securely, it displays programs that stop these tools from appearing, display hidden card readers, and operate with USB, SATA, Firewire, PCMCIA devices.
Key Features of the USB Safely Remove Software :
- Securely Unlinked With Just One Click
- Display Processes That Prevent Stop USB Drive
- Support for Strong Linear Command
- Three Methods to Stop Tools
- Define and Naming Tools
- Ability to run SATA drives
- Playing songs and other external programs when connecting or not connecting these gadgets
Zip Password : www.maungpauk.org
Home Page: https://safelyremove.com/
USB Safely Remove v6.1.2.1270.zip : 5.52 MB
Computer software Drivers PC Drivers
IObit Driver Booster PRO v5.5.1.844 Full Version
Maung Pauk at 11:42:00 PM 0
Windows PC တွေရဲ့ Driver တွေ အမြဲတန်း Update ဖြစ်နေရင် ကွန်ပျူတာ စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်.. ကိုယ့် ကွန်ပျူတာ Driver တွေ Update ဖြစ်ဖို့ Driver တစ်ခုချင်းစီအလိုက် Update လိုက်လုပ်နေဖို့ အဆင်မပြေပါဘူး.. IObit Driver Booster ဟာ Windows PC တွေရဲ့ Hardware တွေကို စစ်ဆေးပေးပြီး Update လုပ်ပေးရမယ့် Driver တွေကို အလိုအလျောက် Update လုပ်ပေးပါတယ်.. ဒါ့အပြင် Driver တွေကို Backup လုပ်ထားနိုင်ပြီး နောင်တချိန် Windows ပြန်တင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Windows Reset ချလိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Driver တွေကို ပြန်တင်ဖို့ အလိုရှိလာခဲ့ရင် Restore လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. IObit Driver Booster ရဲ့ Pro Edition ဟာ Driver တွေကို Download လုပ်ပေးရာမှာ Speed ကန့်သတ်ချက်မရှိတော့တာကြောင့် မြန်ဆန်သွက်လက်ပြီး Driver အားလုံးကို စစ်ဆေးကာ Update လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်.. Free Version ကတော့ Download Speed ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီး Driver အားလုံးကို စစ်ဆေးပေးခြင်းမရှိပါ..
Setup နဲ့ Install လုပ်ပါ.. ပြီးရင် ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက်အောက်ခြေနားက Tray ထဲမှာ IObit Driver Booster ရဲ့ icon လေးကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး exit လုပ်ပါ..
Crack Folder ထဲက Config.ini ကို Copy ကူးထားပါ.. ပြီးရင် Paste 'Config' file HERE! ဆိုတဲ့ Folder လေးကို Double Click နှိပ်ပြီး ပွင့်လာတဲ့ Folder ထဲကို Paste ချပေးလိုက်ပါ.. Copy and Replace တောင်းလာခဲ့ရင် သဘောတူလိုက်ပါ..
Crack Folder ထဲက Register.dll ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကို Copy ကူးပါ.. ပြီးရင် Desktop ပေါ်က IObit Driver Booster icon ကို ညာကလစ်ထောက်ပြီး Open File Location ကိုနှိပ်ပါ.. ပြီးရင် Paste ချပါ.. Copy and Replace တောင်းလာခဲ့ရင် သဘောတူလိုက်ပါ..
ပြီးရင် IObit Driver Booster ကို Run ပါ.. ညာဘက်အောက်နားက Activate Now ရဲ့ဘေးက သော့ပုံလေးကိုနှိပ်ပါ.. ပေါ်လာတဲ့အကွက်လေးထဲကို How to Activate ဆိုတဲ့ Txt ဖိုင်ထဲက Serial Key ၇ ခုထဲက တစ်ခုခုကို Copy ယူပြီး Paste လုပ်.ဘေးက အမှန်ခြစ်လေးကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ.. ဒါဆိုရင်တော့ 29.95 ဒေါ်လာတန် IObit Driver Booster PRO ကို Lifetime သုံးနိုင်ပါပြီ...
Windows PC တှရေဲ့ Driver တှေ အမွဲတနျး Update ဖွဈနရေငျ ကှနျပြူတာ စှမျးဆောငျရညျအတှကျ မြားစှာ အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ.. ကိုယျ့ ကှနျပြူတာ Driver တှေ Update ဖွဈဖို့ Driver တဈခုခငျြးစီအလိုကျ Update လိုကျလုပျနဖေို့ အဆငျမပွပေါဘူး.. IObit Driver Booster ဟာ Windows PC တှရေဲ့ Hardware တှကေို စဈဆေးပေးပွီး Update လုပျပေးရမယျ့ Driver တှကေို အလိုအလြောကျ Update လုပျပေးပါတယျ.. ဒါ့အပွငျ Driver တှကေို Backup လုပျထားနိုငျပွီး နောငျတခြိနျ Windows ပွနျတငျလို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ Windows Reset ခလြိုကျလို့ပဲဖွဈဖွဈ Driver တှကေို ပွနျတငျဖို့ အလိုရှိလာခဲ့ရငျ Restore လုပျပေးနိုငျပါတယျ.. IObit Driver Booster ရဲ့ Pro Edition ဟာ Driver တှကေို Download လုပျပေးရာမှာ Speed ကနျ့သတျခကျြမရှိတော့တာကွောငျ့ မွနျဆနျသှကျလကျပွီး Driver အားလုံးကို စဈဆေးကာ Update လုပျပေးနိုငျပါတယျ.. Free Version ကတော့ Download Speed ကနျ့သတျခကျြရှိပွီး Driver အားလုံးကို စဈဆေးပေးခွငျးမရှိပါ..
Full Version ဖွဈအောငျလုပျနညျး
Setup နဲ့ Install လုပျပါ.. ပွီးရငျ ကှနျပြူတာရဲ့ ညာဘကျအောကျခွနေားက Tray ထဲမှာ IObit Driver Booster ရဲ့ icon လေးကို ညာကလဈထောကျပွီး exit လုပျပါ..
Crack Folder ထဲက Config.ini ကို Copy ကူးထားပါ.. ပွီးရငျ Paste 'Config' file HERE! ဆိုတဲ့ Folder လေးကို Double Click နှိပျပွီး ပှငျ့လာတဲ့ Folder ထဲကို Paste ခပြေးလိုကျပါ.. Copy and Replace တောငျးလာခဲ့ရငျ သဘောတူလိုကျပါ..
Crack Folder ထဲက Register.dll ဆိုတဲ့ ဖိုငျကို Copy ကူးပါ.. ပွီးရငျ Desktop ပျေါက IObit Driver Booster icon ကို ညာကလဈထောကျပွီး Open File Location ကိုနှိပျပါ.. ပွီးရငျ Paste ခပြါ.. Copy and Replace တောငျးလာခဲ့ရငျ သဘောတူလိုကျပါ..
ပွီးရငျ IObit Driver Booster ကို Run ပါ.. ညာဘကျအောကျနားက Activate Now ရဲ့ဘေးက သော့ပုံလေးကိုနှိပျပါ.. ပျေါလာတဲ့အကှကျလေးထဲကို How to Activate ဆိုတဲ့ Txt ဖိုငျထဲက Serial Key ရ ခုထဲက တဈခုခုကို Copy ယူပွီး Paste လုပျ.ဘေးက အမှနျခွဈလေးကို နှိပျပေးလိုကျပါ.. ဒါဆိုရငျတော့ 29.95 ဒျေါလာတနျ IObit Driver Booster PRO ကို Lifetime သုံးနိုငျပါပွီ...
"IObit makes many utilities, and Driver Booster PRO, which automatically updates your drivers, is one of its best. Driver Booster PRO's simple core functionality is made even more attractive thanks to the inclusion of multiple licenses atavery wallet-friendly price, as well asacustomizable interface that doesagood job of displaying specific hardware-related information. Competitors Ashampoo Driver Updater and SlimWare Utilities DriverUpdate offer compelling features, but IObit Driver Booster PRO leads the pack."
Home Page : https://www.iobit.com/en/driver-booster-pro.php
iObit Driver Booster 551.zip : 21.4 MB
Computer software Editor Giveaway Photo Editor
Corel AfterShot3Standard v3.4.0.297 Free Giveaway License for Windows 64 bit
Maung Pauk at 12:23:00 PM 0
Professional Photographer တွေအတွက် Professional-grade photo တွေကို Corel AfterShot ကိုသုံးပြီးပြုပြင်ဖန်တီးလေ့ရှိပါတယ်.. ဓာတ်ပုံတွေရဲ့ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး တကယ့် Professional ကျစွာ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံရဖို့ ဓာတ်ပုံဆရာရဲ့ ရိုက်ချက်တွေကို Corel AfterShot နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရလာတာပါပဲ.. ဒီ Corel AfterShot ဟာ လက်ရှိ 54.99 ဒေါ်လာကျသင့်မှာဖြစ်ပေမယ့် Giveaway ပေးထားတာတွေ့လို့ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်.. Standard Edition ဖြစ်ပြီးတွဲဖက်သုံးစွဲရတဲ့ Plug-ins အချို့အတွက်တော့ အခကြေးငွေ ပေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.. ခု Free ပေးထားတဲ့ Standard Edition ကနေ Pro Edition ကို Upgrade တရားဝင်မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ 14.99 ဒေါ်လာထပ်ပေးရပါမယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် တရားဝင် အလကားရတဲ့ 54.99 ဒေါ်လာတန် Standard Edition မှာတင် Professional-grade Photo တွေဖန်တီးနိုင်မှာပါ...
Professional Photographer တှအေတှကျ Professional-grade photo တှကေို Corel AfterShot ကိုသုံးပွီးပွုပွငျဖနျတီးလရှေိ့ပါတယျ.. ဓာတျပုံတှရေဲ့ အရညျအသှေးပိုမိုကောငျးမှနျပွီး တကယျ့ Professional ကစြှာ ဓာတျပုံကောငျးတဈပုံရဖို့ ဓာတျပုံဆရာရဲ့ ရိုကျခကျြတှကေို Corel AfterShot နဲ့ပေါငျးစပျလိုကျတဲ့အခါ ထူးခွားကောငျးမှနျတဲ့ ဓာတျပုံတှေ ရလာတာပါပဲ.. ဒီ Corel AfterShot ဟာ လကျရှိ 54.99 ဒျေါလာကသြငျ့မှာဖွဈပမေယျ့ Giveaway ပေးထားတာတှလေို့ ပွနျလညျမြှဝလေိုကျပါတယျ.. Standard Edition ဖွဈပွီးတှဲဖကျသုံးစှဲရတဲ့ Plug-ins အခြို့အတှကျတော့ အခကွေးငှေ ပေးဝယျရမှာဖွဈပါတယျ.. ခု Free ပေးထားတဲ့ Standard Edition ကနေ Pro Edition ကို Upgrade တရားဝငျမွှငျ့တငျခငျြတယျဆိုရငျတော့ 14.99 ဒျေါလာထပျပေးရပါမယျ.. ဘာပဲဖွဈဖွဈ တရားဝငျ အလကားရတဲ့ 54.99 ဒျေါလာတနျ Standard Edition မှာတငျ Professional-grade Photo တှဖေနျတီးနိုငျမှာပါ...
Corel AfterShot3is the simple, affordable way to quickly learn professional-grade photo editing. Make easy corrections and enhancements, and apply adjustments to one or thousands of photos at once with batch processing tools.
Sort, organize and view all your photos in one place, quickly and easily with flexible file management options – no importing required.
Speed through loading, selecting, editing and output with an easy-to-use workflow perfect for students and aspiring photographers.
HomePage&Full Features : https://www.aftershotpro.com/
AfterShot 3.zip : 106.64 MB
Android Tool Phone Application Tool Xiaomi
Mi Account Unlock Tool 1.0
Maung Pauk at 12:14:00 PM 0
Xiaomi Device တွေရဲ့ Mi Account တွေ မေ့သွားရင် ပြန်ပြီး Bypass လုပ်ဖို့နဲ့ Mi Account တွေကို အပြီးတိုင် Remove လုပ်ဖို့အတွက် Mi Account Unlock Tool 1.0 ဖြစ်ပါတယ်.. ဖုန်းကို Recovery Mode ဝင်ထားပြီး ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ဆက်ကာ Mi Account ကို Bypass လုပ်မလား၊ Disable လုပ်မလား. ကြိုက်တာ ရွေးနိုင်ပါပြီ.. Mobile Software Advance က ရေးသားတာဖြစ်ပါတယ်..
Xiaomi Device တှရေဲ့ Mi Account တှေ မသှေ့ားရငျ ပွနျပွီး Bypass လုပျဖို့နဲ့ Mi Account တှကေို အပွီးတိုငျ Remove လုပျဖို့အတှကျ Mi Account Unlock Tool 1.0 ဖွဈပါတယျ.. ဖုနျးကို Recovery Mode ဝငျထားပွီး ကှနျပြူတာနဲ့ခြိတျဆကျကာ Mi Account ကို Bypass လုပျမလား၊ Disable လုပျမလား. ကွိုကျတာ ရှေးနိုငျပါပွီ.. Mobile Software Advance က ရေးသားတာဖွဈပါတယျ..
Mi Account Unlock Tool 1.0.zip : 3.79 MB
Password = maungpauk
Live Video Video
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒေသခံပြည်သူများစကားဝိုင်း ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်၊ ချောက်ကန်ကျေးရွာ ( ၉-၈-၂၀၁၈)
Maung Pauk at 10:11:00 AM 0
Download Full Video : 763 MB
Ref : Myanmar State Counsellor Office Facebook Page
Drivers PC Software Phone Drivers
Download USB Drivers for Android Devices From Official Links
Maung Pauk at 10:41:00 PM 0
Select “Drivers & Manuals”.
Download Alcatel USB Drivers For MTK Platform
Download Alcatel USB Drivers For Qualcomm Platform
Download Asus USB Driver (Mirror Link)
Gionee USB Drivers
Download Gionee USB Drivers
Download Huawei HiSuite (Drivers included)
Kyocera USB Drivers
LG Tools and Drivers
Download LG USB Drivers | Mirror (Version 4.03)
Hisense USB Drivers
Download Hisense USB Drivers
Download Micromax USB Drivers Mirror Link
Download Micromax USB Drivers Official Link
Motorola USB Drivers for Windows and Mac
Motorola Fastboot tool
Pegatron USB Drivers
Download Pegatron USB Drivers
Download Panasonic USB Drivers
Download Samsung Kies & SmartSwitch
Download Sony Bridge For Mac
Download Mi Phone Manager
Android Tool Computer software Tool Xiaomi
Xiaomi MiFlash Tool 2018.5.28.0 Portable
Maung Pauk at 5:43:00 PM 0
Xiaomi Qualcomm Device တွေအတွက် အရေးအပါဆုံး Tool ဖြစ်တဲ့ MiFlash Tool ကတော့ v2018.5.28.0 ထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်.. Install လုပ်စရာမလိုတဲ့ Portable Version ဖြစ်ပြီး ဒီ ဗားရှင်းကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ဗားရှင်းအဟောင်းကို Uninstall လုပ်ပစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
Windows XP မှာ အလုပ်မလုပ်ပါ..
အနည်းဆုံး Windows7နဲ့အထက်မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါမယ်.. 32bit, 64 bit တွေကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်..
Mi3 ကလွဲလို့ Xiaomi ရဲ့ Qualcomm Device အားလုံးကို အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်..
အချို့ Device တွေကတော့ Bootloader Unlock လုပ်ထားရပါမယ်..
Xiaomi Qualcomm Device တှအေတှကျ အရေးအပါဆုံး Tool ဖွဈတဲ့ MiFlash Tool ကတော့ v2018.5.28.0 ထှကျလာပွီဖွဈပါတယျ.. Install လုပျစရာမလိုတဲ့ Portable Version ဖွဈပွီး ဒီ ဗားရှငျးကိုသုံးမယျဆိုရငျ ဗားရှငျးအဟောငျးကို Uninstall လုပျပဈရမှာဖွဈပါတယျ..
Windows XP မှာ အလုပျမလုပျပါ..
အနညျးဆုံး Windows7နဲ့အထကျမှာပဲ အလုပျလုပျပါမယျ.. 32bit, 64 bit တှကေို အထောကျအပံ့ပေးပါတယျ..
Mi3 ကလှဲလို့ Xiaomi ရဲ့ Qualcomm Device အားလုံးကို အထောကျအပံ့ပေးပါတယျ..
အခြို့ Device တှကေတော့ Bootloader Unlock လုပျထားရပါမယျ..
Xiaomi Bootloader Unlock Link
You may have to unlock bootloader in order to flash fastboot ROM files. (Depends on the situation)
This Miflash only supports the Qualcomm devices (devices before Mi3are not supported)
Make sure first you uninstall the old Miflash tool from your system!
Decompress the file and make sure that the extracted folder is on desktop
Open the extracted folder (MiFlash2017-5-28-0), in the folder double click on the XiaoMiFlash file(application).
MiFlash Tool 2018.5.28.0 Portable : 49.3 MB
Corel AfterShot3Standard v3.4.0.297 Free Giveawa...
Download USB Drivers for Android Devices From Offi...